ONLF Waa cadow oo ma Arki karo Jigjigana Axmaar baa nagu xukumi?. | ogaden24
ONLF Waa cadow oo ma Arki karo Jigjigana Axmaar baa nagu xukumi?.
Waxaa markii ugu Horaysay tan iyo intii Kooxda EPRDF ay Talada dalka Itobiya lawareegtay xaafad kamida magaalada Jigjiga ee caasimada deegaanka Somaalida madax looga dhigay nin kasoo Jeedo Qomiyada Axmarada.
Sida Ogaden24 uu xog rasmiya kuhelay Duqa magalada Jigjiga Dayib Muxumed Jaamac ayaa Gudomiyaha xaafada Lixaad ee magalada Jigjiga waxaa uu u magacaabay Nin kasoo Jeeda Qomiyada Axmarada, waxayna magacaabistani xad Gudub kutahay dastuurka u Yaala dalka Itobiya.
Sida ku cad Dastuurka Itobiya ruuxa Itobiyanka ahi wuxuu Xaq u leeyahay inuu dalka kaga Noolaado meesha uu Rabo, balse xaq uma laha in laga doorto ama uu wax kadoorto deegaan aan ahayn midka uu Asal ahaan kasoo Jeedo, Tusaale ahaan shakhsiga Somaaliga ah ee kudhashay kuna nool magalada Bahardar ee caasimada Xabashida lagama dooran karo waxna kama dooran karo magaladaasi oo waxaa u diidaya dastuurka Qomiyadaha kusalaysan.
Talaabadani uu Qaaday Mayor-ka magalada Jigjiga ee sharcidarada ah ayaanay Jirin cid ilaa iyo Hada kahadashay waxayna u muuqataa in kudhiirashada Duqa magaladau kudhiiraday xil u dhiibista shakhsi aan deegaanka u dhalan ay tahay mid ay ku Lug leeyihiin masuuliyiinta sare ee Heer Gobol ilaa iyo Heer Degaan.
Su’aasha is waydiinta mudan ayaa ah Aaway dadkii kudoodayay inay iyagu Leeyihiin magalada Jigjiga ee diidaan in calanka ONLF lagu dhex arko ruux xidhan? mise ONLF iyo Taageerayaasheeda kaliya ayaa ah cadowga ree Jigjiga oo Axmarada, Tigreega iyo Oromadu waa Walaalaha ree Jigjiga?.
Waxaa Hubaala Hadii Falkan laga Hortagi Waayo in dorashada soo socotana uu magalada Jigjiga kasoo Gali doono xiliban kasoo Jeeda Qomiyadaha Oromada iyo Axmarada midkood, Waayo majiro wax u diidaya dadka Labadaasi Qomiyadood inay Jigjiga iska sharaxaan mar Hadiiba ay suuragashay inay Gudomiye xaafadeed kanoqdaan.